Umaki: i-serp | Martech Zone
Ungalifaka Kanjani I-Ejensi Yakho Ukuphatha Ukufakwa Kuhlu Kwebhizinisi Lakho le-Google
NgoLwesine, Septhemba 16, 2021 NgoLwesine, Septhemba 16, 2021 Douglas Karr
Besisebenza namakhasimende amaningana lapho izivakashi zosesho lwasendaweni zibaluleke kakhulu ekutholeni amakhasimende amasha. Ngenkathi sisebenza kusayithi labo ukuqinisekisa ukuthi liqondiswe ngokwendawo, kubalulekile futhi ukuthi sisebenze kuhlu lwabo lwe-Google Business. Kungani Kufanele Ugcine Uhlu Lwebhizinisi le-Google amakhasi wemiphumela yenjini yokusesha ahlukaniswe abe izingxenye ezi-3: Izikhangiso ze-Google - izinkampani ezibhida kuzindawo eziyinhloko zezikhangiso phezulu nangaphansi kwe-
Ziyini Incazelo Ye-Meta? Kungani Zibalulekile Kumasu Wenjini Engosesho Engokwemvelo?
NgoLwesibili, ngo-Mashi 23, i-2021 NgoLwesibili, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi abathengisi abakwazi ukubona ihlathi lezihlahla. Njengoba ukwenziwa kwezinjini zokusesha kuthole ukunakwa okuningi kule minyaka eyishumi edlule, ngibonile ukuthi abathengisi abaningi bagxila kakhulu ezingeni nasekulandelweni kwethrafikhi elandelayo, bakhohlwa isinyathelo empeleni esenzeka phakathi. Izinjini zokucinga zibaluleke kakhulu kuwo wonke amabhizinisi 'amandla okushayela abasebenzisi ngenhloso ekhasini elikusayithi lakho elinikeza injongo kumkhiqizo noma kusevisi yakho. Futhi meta
Thuthukisa Ubukhona Bakho be-Google SERP Ngalezi Zincwajana Ezicebile
NgoLwesibili, Januwari 26, 2021 NgoLwesibili, Januwari 26, 2021 Douglas Karr
Izinkampani zichitha ithani lesikhathi zibona ukuthi zikleliswe kusesho nokwakha okuqukethwe okumangazayo namasayithi aqhuba ukuguqulwa. Kepha isu eliyisihluthulelo elijwayele ukuphuthelwa ukuthi bangakuthuthukisa kanjani ukungena kwabo ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha. Ukuthi usezingeni noma awukhathaleli kuphela uma umsebenzisi wokusesha ephoqelekile ukuthi achofoze phakathi. Ngenkathi isihloko esihle, incazelo ye-meta, ne-permalink kungathuthukisa lawo mathuba… kungeza amazwibela acebile kusayithi lakho
I-SERP yanamuhla: Ukubuka Okubonwayo Emabhokisini we-Google, Amakhadi, Amazwibela Acebile, namaPhaneli
ULwesithathu, May 6, 2020 ULwesithathu, May 6, 2020 Douglas Karr
Sekuyiminyaka eyisishiyagalombili selokhu ngaphoqa amaklayenti ami ukuthi afake amazwibela acebile ezitolo zawo eziku-inthanethi, kumawebhusayithi nakumabhulogi. Amakhasi wemiphumela yenjini yokusesha yakwaGoogle asephendukile, aphefumula, ashukumisayo, abe ngamakhasi wakho ukuze uthole ulwazi oludingayo… sibonga kakhulu izithuthukisi ezibukwayo abazenzile ekhasini lemiphumela lenjini yokusesha besebenzisa idatha ehleliwe enikezwe abashicileli. Lokho kuthuthukiswa kufaka: Amabhokisi Ezimpendulo Aqondile anezimpendulo ezimfushane, ezisheshayo, uhlu, ama-carousels, noma amatafula